दुखद खबर : अस्पतालको चक्कर काट्दाकाट्दै विरामीको मृत्यु ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
दुखद खबर : अस्पतालको चक्कर काट्दाकाट्दै विरामीको मृत्यु !
Published : 8 August, 2020 2:45 pm
वीरगञ्जमा अस्पतालको चक्कर काट्दाकाट्दै एक विरामीको मृत्यु भएको छ । वीरगञ्ज-२ छपकैया बस्ने २० वर्षीया विष्णु लामाको मृत्यु भएको हो ।
ज्याला मजदुरी गर्ने उनी ४ वर्षकी छोरीसहित वीरगञ्ज बस्दै आएकी थिइन् । राति अचानक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल गएकी थिइन् ।
नारायणीसहित वीरगञ्जका अधिकांश निजी अस्पतालले भर्ना नलिएपछि उनी कोरोना विशेष अस्पताल, गण्डक पुगेकी थिइन्, जहाँ शनिबार बिहान २ बजेतिर निधन भएको छिमेकी अजित भुजेलले जानकारी दिए । अस्पताल आइपुग्दा उनी अन्तिम अवस्थामा पुगेेकाले बचाउन नसकिएको कोभिड अस्पतालका डा उदय नारायण सिंहले जानकारी दिए ।
ड्युटीमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले उपचार शुरु मात्रै गरेका थिए, विरामीको मृत्यु भयो’ उनले भने ।पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरेर नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाईएको डा सिंहले बताए ।
पछिल्लो समयमा वीरगञ्जका अस्पतालहरुले कोभिडको आशंकामा उपचार नगरी सिरियस केस गण्डकमा पठाउने क्रम बढेको छ ।शुक्रबार पनि नेशनल मेडिकलले भर्ना गर्न नमानेपछि गण्डक ल्याइएका वीरगञ्ज-३ छपकैयाका एक वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । शुक्रबार बेलुका उनमा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
विरामीलाई नेसनल मेडिकल कलेज लगियो । नेसनलमा हार गुहार गर्दा पनि भर्ना लिन मानेन । स्थानीय पत्रकार पत्रकार अजित भुजेल हुँदै यो खबर जसपाका नेता तवरेज अहमदसम्म पुग्यो । उनले ‘अस्पतालमा फोन गरिदिन्छु र म पनि निस्कन्छु । विरामीलाई नारायणी लैजान भन्नुस्’ भन्ने सन्देश पठाए ।
विरामी अस्पताल पुगे । तवरेजले विरामीको आफन्तमार्फत चिकित्सकसँग कुरा गरे । तर ड्यटीमा रहेका चिकित्सकले ‘सामान्य उपचार मात्रै गर्न सकिन्छ, उहाँमा शंकास्पद कोभिडको लक्षण छ । यहाँ उपचार हुन सक्दैन’ भनिदिए ।